AirSnap, okwu ọhụrụ maka iri na abụọ South AirPods | Akụkọ akụrụngwa
AirSnap, okwu ọhụrụ maka iri na abụọ South AirPods
Ngwa na mkpuchi maka AirPods enwere ọtụtụ na ahịa ma nke a bụ ihe ọzọ na-agbakwụnye na ndepụta nke onyinye nwere ike maka onye na-eji ekweisi ikuku Apple. N'okwu a ọ bụ ọtụtụ ihe mkpuchi akpụkpọ anụ AirSnap, site na ụlọ ọrụ iri na abụọ South.
Typedị ngwa a nwere ike ịmasị ka ị ghara ida AirPods ebe ọ bụ na mgbakwunye na chebe ikpe ahụ site na obere ntụ ma ọ bụ abrasions, na-enye onye ọrụ ohere ịnweta njikọ nkwụnye ụgwọ na ekweisi na onwe ha ngwa ngwa na ngwa ngwa, na-enweghị wepụ ma ọ bụ metụ karịa ihe dị mkpa.
South iri na abụọ nwere ngwaahịa dị mma
Enweghị m ihe ọ bụla ma ọ bụghị okwu ọma banyere akara a na ọ bụ na ngwaahịa niile m zụtara na iri na abụọ South agbanweela nke ọma. O nwere ike ịbụ na ụfọdụ n'ime ha nwere nsogbu ma ọ bụ daa n'akụkụ ụfọdụ, mana njirimara niile nke ngwaahịa ha dị ezigbo mma. Na nke a anyị nwekwara ngwaahịa nke na-egosi na ọ na-atọ ụtọ n'ezie n'akụkụ ya niile, gụnyere uru maka ego ya mere o siri ike ịbịa site na ngwa maka ngwaahịa Apple nke atọ.
A na-eji karama na-eji carabiner eji oji ma nye anyị ohere ịkwanye ya na zipa akpa, na uwe ogologo ọkpa ma ọ bụ ebe ọ bụla anyị chọrọ. Anyị nwere ike ịchọta agba atọ dị iche iche maka iwu tupu: na acha anụnụ anụnụ, aja aja ma ọ bụ oji y ụgwọ maka ụgbọ elu AirPod a bụ $ 29. Mbupu maka ndị nyere iwu ka ikpe iri na abụọ a na South ga-amalite ịbata na August 6. Can nwere ike ịnweta ha site na gọọmentị webụsaịtịnke ụlọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » AirSnap, okwu ọhụrụ maka iri na abụọ South AirPods
Huawei karịrị Apple wee bụrụ onye nrụpụta nke abụọ na-ere ọtụtụ smartphones n'ụwa niile